Shina : Afaka manafina ny afo ve ny taratasy ? · Global Voices teny Malagasy
Shina : Afaka manafina ny afo ve ny taratasy ?
Nandika (fr) i Nicolas Wong
Voadika ny 22 Oktobra 2018 15:30 GMT
Vakio amin'ny teny 简体中文, 繁體中文, Français, বাংলা, Italiano, English
( Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Febroary 2009)
Avy tamin'ireo afomanga nalefa nandritra ny fankalazana ny Fetin'ny Harendrina (元宵) ilay fahamaizan'ilay fanitarana ireo toerana hisy rahatrizay ny Fahitalavitra Foibe ao Shina (CCTV) tamin'ny omaly alina (ny 9 febroary 2009). Nandrakitra ny fiparitahany tamin'ny alalan'ny andiana sary maromaro ny blaogera Anlei. Na dia voina tsy nampoizina aza ilay fahamaizana, nanapa-kevitra ny ”hampifanaraka” (hanasivana) ilay vaovao ihany ny Departemantan'ny propagandy. Nalefa tamin'ireo vavahadinà tranonkala rehetra noho izany ity fampahalalana ity (tamin'ny twitter) :
Ho an'ireo tranonkala Aterineto rehetra : ”Raha ny mikasika ilay fahamaizana tao amin'ny fanitarana ilay tranobe vaovao an'ny CCTV, iangaviana ianareo tsy hampiasa afa-tsy ny taratasim-baovaon'ny [masoivohom-baovao ofisialy] Xinhua. Aza mamoaka sary, na lahatsary, na fandalinana lalina. Apetraho ao amin'ny sokajy ”Vaovao nasionaly” ilay lahatsoratra, hidio ny fanehoankevitra, ary aza manolotra rohy mankany amin'ny sehatra fifanakalozan-kevitra any amin'ireo karajia na lahatsoratra am-bilaogy momba io resaka io.
Afaka manakana ny olona tsy hiresaka momba ilay fahamaizana ve ny fepetra toy izany? Mametraka izany fanontaniana izany ihany i Wang Xiaofeng fa amin'ny fomba feno angesom-piteny kokoa : ”Afaka manafina ny afo ve ny taratasy ?”
新央视办公楼附楼在元宵节晚上因为燃放焰火不慎起火，目击者最先通过手机短信将消息传出去，然后是网站，通过各种方式将消 息发布出去。很多门户网站以最快速度做成专题。但时间不长，这些专题都被撤掉了。很显然，用裤衩思考都知道这些网站接到了主管部门的命令，对于这类重大新 闻事件，要以新华社的消息为主，不能乱报道。新华社记者都在过节，好像当时没有在场等待起火的记者吧？如果这有这样的记者，该把这个记者抓起来问问是不是 同谋。即便新华社记者恰好在场，他还要核实消息的真实性，然后把稿子写完，交给领导审查，领导对于这类重大新闻事件估计还做不了主，还要报上级领导批示， 等上级领导批示完了，全世界都知道了。
Nirehitra tsy nahy ny trano ao amin'ilay fanitarana ny CCTV nandritra ny Fetin'ny Harendrina. Haingana be ny nakana sy nanaparitahan'ireo nanatri-maso ny vaovao tamin'ny findainy, avy eo nalain'ireo tranonkala Aterineto ilay vaovao mba hanaparitahana azy . Nanokatra pejy manokana momba ilay tranga ny vavahadin-tserasera maro. Na izany aza, voafafa haingana ireo vontoaty ireo. Tena mazava be fa na dia ireo misaina amin'ny silipony aza dia nahazo fa noho ny nahazoany ny baiko avy amin'ny Departemanan'ny fitantanana ny Aterineto no nanaovan'ireo tranonkala ireo izany. Ho an'ny vaovao tsy dia fahita toy itony, tokony hifantoka amin'ireo taratasim-baovaon'ny masoivohom-baovao Xinhua ireo vaovao rehetra ary tsy afaka mitatitra ilay tranga toy ny hitiavana azy ny tranonkala Aterineto. Fa any am-pialana sasatra ireo mpanao gazety ao amin'ny Xinhua ary tsy nampoizina ilay fahamaizana. Raha teny marina mantsy ny mpanao gazety iray, mety ho nohadihadiana ho nisy idirany tamin'ilay fahamaizana. Ary raha toa ka teny an-toerana ny mpanao gazety avy ao amin'ny masoivohom-baovao Xinhua, dia tokony nanamarina izany vaovao izany, handika izany an-taratasy ary handefa izany amin'ny lehibeny mba hankatoavany azy. Ary ho an'ny tranga toy izao, mety tsy ho afaka ny hanana ny teny farany ny lehibeny, tsy maintsy ho naka hevitra tany amin'ny lehibeny koa izy. Ary, farany, mialoha ny hankatoavana ilay lahatsoratra, mety efa nahafantatra ilay vaovao daholo izao tontolo izao .
这里大概有个尺度问题，比如火灾的程度，是严重还是轻微，报道口径问题，比如有关领导是否到场，领导在现场说了什么话，要 体现出来，中国的重大新闻报道里缺少领导怎么能成为新闻呢？领导一定比火还要火才行。所以说，要以新华社为主，你就是在楼下目睹了全部着火过程，你就是亲 自点的火，你报道出来都不真实。都火烧眉毛了，还遮遮掩掩。
Mipetraka ny olana amin'ny fomba fijerin'ilay lahatsoratra, ohatra : hatraiza no halehiben'ny fahavoazana naterak'ilay fahamaizana ? Lehibe sa kely ? Ny olan'ny feo ihany koa. Ohatra : Nisy tomponandraikitra ara-politika ve nankeny an-toerana ? Raha eny, inona no nambarany ? Raha ho an'ny vaovao lehibe toa itony, tsy afaka ny tsy hanonona tomponandraikitra ara-politika ny lahatsoratra. Tokony hafana kokoa noho ilay afo ireto farany. Izany no mahatonga ny taratasim-baovaon'ny masoivohom-baovao Xinhua ho tsy maintsy hanan-kery. Noho izany, na dia nanatrika ilay fahamaizana hatramin'ny voalohany aza ianao, ary na mety ho ianao mihitsy aza no niandohany, tsy afaka ny ho marina ny lahatsoratrao. Mety hoe andalam-pirehetana ny volomasonao izao, fa tsy maintsy afenina foana ilay vaovao miresaka fahamaizana na izany aza.
Efa lany andro ny fotoana nibodoan'ny olona vitsivitsy ny haino aman-jery. Samy manana finday, fakantsary, solosaina ary afaka miditra amin'ny Aterineto rehefa te-hiditra amin'izany isika. Manasaro-javatra izany ho an'ny masoivohom-baovao Xinhua sy ny Departemantan'ny fanarahamaso ny haino aman-jery. Ahoana ny hitantanana tranga izay tsy ahafahan'ny taratasy manafina ny afo? Mampalahelo ahy izy ireo.
最要命的是，着火的地方恰恰是外媒、使馆集中的地区，这些外国记者估计只要在办公室把摄像机架起来就可以现场直播了，连出 门都免了，百分百的现场直播。而我们着火单位主频道此时还在欢度元宵节，另一个新闻频道也是在一个小时后才有横飞字幕，看来真是火烧眉毛都不着急。佩服佩 服。还好，这栋楼还没有投入使用，人员伤亡几率比较低，但他妈的那也是那钱造出来的，怎么就那么沉着呢？难道只有把大裤衩烧成了红烧鸡巴你才觉得疼吗？
Ny tena loza dia nitranga tany amin'ny faritra izay misy haino aman-jery sy masoivoho vahiny ilay fahamaizana. Tsy nila afa-tsy ny nametraka kamera tao amin'ny biraony mba handrakofana ilay tranga mivantana ireo mpanao gazety vahiny. Tsy mila mivoaka akory aza. Nandritra izany fotoana izany, nandefa ny fandaharana mikasika ny Fetin'ny Harendrina ilay fantsona fahitalavitra fototra antsika, izay norotehin'ny afo ny tranobeny vaovao. Ora iray taty aoriana vao nitatitra ilay fahamaizana ireo fantsona fampahalalam-baovao hafa, tamin'ny alalan'ny taratasim-baovao misosa ambanin'ny efijery. Tsy tsapan-dry zareo ny filàna mandrakotra ilay fahamaizana nefa ny volomasony efa mirehitra. Arahabaina. Soa ihany fa tsy mbola nisy nipetraka tao amin'ilay trano ary tsy dia maro ireo naratra. Fa lafo vidy ihany anefa ilay trano, ahoana no nahafahan-dry zareo tsy niraharaha io vaovao io? Tsy maintsy niandry hoe nirehitra ve ny trano fototra, ny ”Silipo Be” (solonanaran'ilay tranoben'ny CCTV), tao anelakela-pe izay ry zareo vao mba hanomboka hahatsapa fanaintainana?
En ce qui concerne cet incident, les médias officiels se sont faits battre par le journalisme citoyen. / Raha ny mikasika ity tranga ity, resin'ny fanaovan-gazety an'olontsotra ny haino aman-jery ofisialy.
Eto ambany ny lahatsary Youtube nalain'ny olontsotra mikasika ilay fahamaizana
Ho an'ny vaovao bebe kokoa mikasika ilay fahamaizan'ny CCTV (amin'ny teny anglisy) :
CCTV en feu Sun Bin / CCTV mirehitra Sun Bin
ChinaSMACK / CCTV ao Pekin, vaovao voasivana ChinaSMACK
Mandarin Oriental Photos ao Sina (talohan'ny ”nampifanarahana” azy ireo ) Elliott Ng, CN Reviews
Sarin'ny fahamaizan'ny CCTV – Resahany ny vaovao indray ny Twitter David Feng, CN Reviews
Manarona ny fahamaizan'ny tranoben'ny CCTV Joel Martinsen, DANWEI